Carts Guru: Ahịa akpaaka maka Ecommerce | Martech Zone
Ọ bụ ihe nwute na nyiwe ecommerce anaghị eme ka ahịa bụrụ ihe kacha mkpa. Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ị gaghị enwe ike ịnweta ego gị zuru oke belụsọ ma ị nwere ike inweta ndị ahịa ọhụụ ma bulie ikike ndị ahịa nwere ugbu a.
Obi dị m ụtọ, e nwere nnukwu ụdị ụdịrị akpaaka azụmaahịa dị ebe ahụ na-enye ngwaọrụ niile dị mkpa iji lekwasịrị ndị ahịa anya ebe ha nwere ike imeghe, pịa, ma zụta. Otu ikpo okwu dị Guru Guru. Carts Guru na-enye atụmatụ ọ bụla dị mkpa iji bulie ego site n'aka ndị ahịa ọ bụla ị jidere na mgbasa ozi ahịa ahaziri iche.
Carts Guru Atụmatụ na Uru Gụnyere
Azụmaahịa Azụmaahịa Ecommerce - Carts Guru akpaghị aka workflows hụ na ị na-achụ ọsọ ọ bụla ụzọ na tọghata ọ bụla ire ere. N'ime ole na ole ị nwere ike ịmepụta ma hazie mkpọsa maka mmata, nchebara echiche, na usoro nlekọta nke njem ndị ahịa, wee pịa mmalite na ikpo okwu na-elekọta ndị ọzọ.
Ecommerce Multichannel Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi - Mgbasa ozi ahịa nke Multichannel na-akpaghị aka ndị ahịa ebe ha nwere ike imeghe, pịa, ma zụta. Carts Guru na-eme ka ọ dị mfe ijikọta email, SMS, na Facebook Messenger n'ime otu mkpọsa na-emekọ ihe ọnụ iji bulie nlọghachi.
Ecommerce arụmọrụ Dashboard - Nyochaa ROI nke mkpọsa gị ma soro uto azụmaahịa gị na dashboard e-ahịa gị. Carts Guru na-enye gị nghọta dị mkpa banyere iwu, mkpọsa, ọrụ weebụsaịtị, yana ndị ọzọ ka ị nwee ike ịme mkpebi mara ma bulie azụmaahịa gị.
Ngalaba Ahịa Ecommerce - Debanye aha ndị ahịa na akpaghị aka na ndepụta ndị na-ege ntị dị mkpa na nkewa nkewa.
Mkpokọta Ecommerce Platform Mkpokọta Na-enweghị Aka Nweta - Jikwaa ahịa maka ọtụtụ ụlọ ahịa e-commerce site na akaụntụ Carts Guru gụnyere Prestashop, Magento, WooCommerce, na ọtụtụ ụlọ ahịa Shopify.
Gbalịa Carts Guru n'efu
Ngosipụta: Abụ m a Guru Guru Mgbakwunye.
Tags: mkpọsa ịgbahapụ mkpọsaozi ịntanetị gbahapụrụ agbahapụụgbọ gbahapụrụ smsadọkpa gurue-commerce ahịa akpaakangwakọta ecommerceecommerce nkekọrịta mgbasa ozimagentoPrestaShopụlọ ahịaịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụgaa mkpọsamerie-azụmmeri-azụ mkpọsa